साउन १७ गते आइतबार सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस १ भेटी स्वरुप सबैले सेयर पनि गरौ ! – Samriddhakhabar
July 31, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on साउन १७ गते आइतबार सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस १ भेटी स्वरुप सबैले सेयर पनि गरौ !
यो हप्ता न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ । धन हात पार्न पनि सक्छ, तर खानपान र स्वास्थ्य प्रति सजग रहन आवश्यक छ । मध्य सातामा चुनौतीको सामना गरि गलत निर्णय लिन पुगिएला सचेत रहनुहोला ।
यो साता आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिएला । अधिकार प्रातिका लागि संघर्ष गर्नु पर्ला । मित्रहरूले दिएको वचन फेरिन सक्छ । चोटपटकको भय छ सचेत रहनुहोला । मङ्गलवारबाट साथी भाइको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ ।
यो साता एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ । साताको उत्तरार्धबाट विशिष्ट व्यक्तिको साथ पाइनेछ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ ।
यो सातामा प्रेम सम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेको छ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । साताको उत्तरार्धबाट महत्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउनेछ ।
यो हप्तामा परिवारमा रमाइलो भेटघाट र जमघट हुनेछ । आदर्श व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । शेयर बजारको लगानीबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ ।
यो सातामा सानातिना समस्यामा अल्झनुपर्नेछ र मनमा चञ्चलता बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । शेयर बजार तथा व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला । बुधबारबाट विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ ।
यो साता आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रको कार्य अघि बढ्नेछ । रोकिएका घरायसी काममा उन्नति र प्रगतिको वातावरण बन्नेछ ।
सामाजिक र धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । नयाँ काम वा रोजगार पाइनेछ । बिना प्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । स्वास्थ्य र शेयर बजारको लगानीबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ । घरमा पाहुनाको आगमन हुने सम्भावना पनि छ ।
नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । साथीभाइबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । पारिवारिक साथ सहयोग र समर्थन मिल्नेछ । रमाइलो यात्राको योग पनि रहेको छ ।
यो साता रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । शुभकार्यको चर्चा चल्ने र आस्था बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ।
यो साता सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने समय छ । रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । साताको अन्त्यमा व्यस्तता बढ्नुका साथै सामान हराउन सक्नेछ । निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
यो साता धार्मिक कृत्यमा सहभागीको अवसर मिल्नेछ । आफन्त, सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्छ । भौतिक साधन जुटाउने समय छ । मध्य सातामा प्रेममा मनमुटाव रहला । महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला ।
June 12, 2021 खबर समृद्ध
असार ३१ गते बिहिबार, सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस ! भेटी स्वरुप सबैले सेयर पनि गरौ !